दुई महिनापछि शुरु हुने भ्रमण वर्षमा पर्यटकलाई विशेष छुट अफर घोषणा ! - Subhay Postदुई महिनापछि शुरु हुने भ्रमण वर्षमा पर्यटकलाई विशेष छुट अफर घोषणा ! - Subhay Post
दुई महिनापछि शुरु हुने भ्रमण वर्षमा पर्यटकलाई विशेष छुट अफर घोषणा !
सुभाय् संवाददाताNovember 4, 2019 मा प्रकाशित (२ साल अघि) अनुमानित पढ्ने समय : ३ मिनेट
काठमाडौं– नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० अभियान नजिकिएसँगै पर्यटकीय सेवा प्रदान गर्ने विभिन्न सङ्घसंस्थाले आफ्ना सेवामा विशेष छुट अफर घोषणा गरेका छन् । अबको दुई महिनापछि शुरु हुने भ्रमण वर्षलाई लक्षित गर्दै होटल एशोसिएसन अफ नेपाल(हान) , घरबास कार्यक्रम ‘होमस्टे’ एशोसिएसनलगायत संस्थाले पर्यटकका लागि छुट अफर ल्याएका हुन् ।
होटल एशोसिएसन अफ नेपालमा पर्यटकस्तरदेखि पाँचतारेसम्म गरी करीब दुई हजार होटल आबद्ध छन् । एशोसिएसनको हाल १५ च्याप्टर छन् । यस्तै होमस्टे एशोसिएसनले पनि भ्रमण वर्षमा आउने विदेशी पर्यटकलाई सेवामा २० प्रतिशतसम्म छुट दिने भएको छ । संस्थाका अध्यक्ष केशव बडालले घरबासमा खाना बस्नमा ‘लजिङ फुडिङ’ मा २० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो । देशका ५७ जिल्लामा ६०० भन्दाबढी घरबास सञ्चालनमा रहेका छन् ।